Maxaa ka jira inuu iscasilay Jawaari? | Baydhabo Online
Gudoomiye kuxigeenka koowaad ee Golaha Shacabka ee Baarlamanka Federaalka ee Soomaaliya, Cabdiwali Ibraahim Sheekh Muudey, ayaa xildhibaannada isaga taageersan u sheegay inuu iscasilay gudoomiye Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, sida ay BBC-du ka soo xigatay qaar ka mid ah mudanayaasha.
Illaa hadda wax wara oo ka soo baxay Gudoomiye Jawaari ma jiro laakiin xildhibaano isaga ku dhaw dhaw ayaa BBC-da u xaqiijiyay inuu ogolaaday inuu xafiiska banneeyo.
Arintan ayaa timid kaddib markii kulan soo bilowday saqdii dhexe ee xalay soona gaaray ilaa saaka waabarigii uu dhex maray Madaxweynaha Soomaaliya Maxamad Cabdillahi Farmaajo iyo gudoomiyaha la sheegay inuu is casilay Maxamad Sheekh Cismaan Jawaari.
Dhanka kale wadooyinka magaalada ayaa dib loo furay kaddib markii ay soo baxaday sheekada ku saabasan baaqashada kulanka baarlamanka, halka markii hore dadweynaha magaalada ay saaka ku soo tooseen wadooyinka oo xiran.
Haddii ay dhab noqoto iscasilaadda gudoomiye Jawaari, waxay xilligan la joogo soo gabagabaynaysaa mushkiladihii siyaasadeed ee kala qaybiyay Golaha Shacabka dhowrkii todobaad ee ugu dambeeyay isla markaana gaabiska ku keentay hawlihii kale ee dawladda.